Umxube we-Chichén Itzá weToltec kunye nePuuc Architecture
Sciences soLuntu Uphando
Uhambo oluhambayo lweMaya Capital of Chichén Itzá
I-Chichén Itzá, enye yezona ndawo ziyaziwa ngokutsha kweemvula zakuMaya, zinomntu ohlukeneyo. Isiza sisekuhlaleni kwe-Yucatan yaseMexico, malunga neekhilomitha ezingama-90 ukusuka kummandla wonxweme. Ingxenye engezantsi yesayithi, ebizwa ngokuba yiCall Chichén, yakhiwa malunga ne-700 AD, ngamaMaya emigres ukusuka kummandla wasePuuc osezantsi kweYucatan. I-Itza yakha iithempeli kunye neendonga zaseChichén Itzá kuquka iNdlu eBomvu (Casa Colorada) kunye neNunnery (Casa de las Monejas). Icandelo leToltec leChichén Itzá lafika ukusuka eTula kunye nempembelelo yabo ibonakala kwi-Osario (i-High Priest Graves), kunye ne-Eagle kunye ne-Jaguar Platforms. Eyona nto inomdla, ukudibanisa kweendawo zombini kwadala i-Observatory (iCaracol) kunye neNdlu yama-Warriors.
Abafaki beli projekthi baquka uJim Gateley, uBen Smith, uDolan Halbrook, u-Oscar Anton kunye noLeonardo Palotta
IPuuc - iPurus Style Architecture eChichén Itzá
Indawo yamaMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iMexico ngokuPheleleyo iPuuc - i-Puuc Style Architecture eChichén Itzá. ULeonardo Palotta (c) ka-2006
Esi sakhiwo esincinane sinesimo esihle sePuuc (ebizwa ngokuba yi-pook). I-Puuc ligama lentaba kwi-peninsula yaseYucatan yaseMexico, kwaye ilizwe labo liquka amaziko amakhulu ase- Uxmal , iKabah, uLabna no-Sayil. U-Mayanist uFalken Forshaw uyongezelela: Abasunguli bokuqala baseChichén Itzá yi-Itzá, abayaziwa ukuba bafuduke kwiindawo zaseLake Peten kumzantsi we-Lowlands, ngokusekelwe kubungqina beelwimi kunye namaxwebhu angama-Maya, emva kweminyaka engama-20 ukugqiba uhambo . Ibali eliyinkimbinkimbi kakhulu, njengoko kwakukho iindawo zokuhlala kunye nenkcubeko eNyakatho ukususela ngaphambi kwexesha elikhoyo.
Isitayela sePuuc sakhiwo sakhiwa ngamatye aqingqiweyo aqhotyoshelwe endaweni engaphezulu kwintsimbi yokukhwabanisa, uphahla lwamatye kunye neenqwelo ezigubungelayo kunye neengqungquthela ezicacileyo kwiimpawu zeekhiometri kunye namatye. Izakhiwo ezincinci ezinjengalezi zibeka ngokucacileyo izinto ezincinci zidibaniswe nekhefu elinqabileyo lwe-roof-it tiara yamahhala ephezulu kwisakhiwo, kule meko nge-lattice crust mosaic. Uyilo lwephahla kule sakhiwo luneemaskki ezimbini zeCak zikhangele; I-Chac igama likaMean Rain God, enye yezithixo zokuhlawulela zaseChichén Itzá.
UFalken uyongezelela: Izinto ezibizwa ngokuba yi-Chac masks ngoku zicatshangelwa ukuba zi "zint" okanye izithixo zeentaba ezihlala ezintabeni, ingakumbi ezo ziphakathi kwesikwere se-cosmic. Ngaloo ndlela iimaski zinika umgangatho "wentaba" kwisakhiwo.
I-Chac Masks - iMask of Rain God okanye i-Gods Mountain?
Indawo yamaMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iMexico iMac Masks (okanye i-Witz Masks) kwiZakhiwo zoKwakha, iChichén Itzá, eMexico. UDolan Halbrook (c) ka-2006
Enye yeempawu zePuuc ezibonwa kwizakhiwo zaseChichén Itzá kukukho kweemaski ezintathu eziqhelekileyo ezikholelwa ukuba ziyimimoya yemvula yamaMaya kunye neCanga yombane okanye uThixo B. Lo othixo ungomnye wabantu bokuqala bamaMaya abaye bachongwa, ulandelelanisa ukuqala kwempucuko yamaMaya (malunga ne-100 BC-AD 100). Iintlobo zegama lezithixo zamanzi ziquka i-Chac Xib Chac ne-Yaxha Chac.
Iziqephu zokuqala zeChichén Itzá zazinikezelwa kwiChac. Uninzi lwezakhiwo zokuqala e-Chichen zineempawu ezi-3 eziyi-Witz ezifakwe kwiimpahla zazo. Benziwe ngamacandwe ngamatye, kunye nephunga elide. Emaphethelweni kwesi sakhiwo sinokubonwa emaski amathathu e-Chac; Kwakhona ukhangele kwisakhiwo esibizwa ngokuba sisiHlomelo seNunnery, esiyi-Witz masks kuso, kwaye i-facade yonke yesakhiwo yakhiwa ukuba ibonakale njenge-maski.
U-Mayanist uFalken Forshaw uthi: "Oku kwakubizwa ngokuba yi-Chac masks ngoku kucatshangelwa ukuba" i-witz "okanye izithixo zeentaba ezihlala ezintabeni, ngokukodwa ezo ziphakathi kwendawo ye-cosmic. sakhiwo. "
Ngokuphelele iToltec - iToltec Styles Architectural at Chichen Itza
Indawo yeMaya yaseChichén Itzá, Yucatan, eMexico El Castillo - Chichén Itzá. UJim Gateley (c) ka-2006
Ukususela malunga ne-950 AD, isitayela esitsha sokwakhiwa kwezakhiwo e-Chichén Itzá, ngokungathandabuzeki kunye nabantu kunye nenkcubeko: i- Toltecs . Igama elithi 'Toltecs' lithetha izinto ezininzi kubantu abaninzi, kodwa kule ndawo sithetha ngabantu abavela edolophini yaseTula , kwintoni ngoku i-Hidalgo, eMexico, oye waqala ukwandisa ukulawula kwawo okude kude kwimimandla yaseMesoamerica ukusuka ekuwa kweTeotihuacan ukuya kwekhulu le-12 AD. Nangona ubuhlobo obukhoyo phakathi kweItas kunye neToltecs ukusuka eTula buyinkimbinkimbi, ngokuqinisekileyo ukuba utshintsho olukhulu kwizakhiwo kunye neengcamango zenzeke eChichén Itzá ngenxa yempembelelo yabantu baseToltec. Isiphumo mhlawumbi sisigaba esilawulayo esakhiwa yiYucatec Maya, Toltecs, kunye neItzas; Kunokwenzeka ukuba amanye amaMaya ayekwaseTula.
Isitayela seToltec siquka ubukho beenyoka okanye inyoka ebizwa ngokuba yiKukulcan okanye iQuetzalcoatl, i-chacmools, i-Tzompantli skull, neToltec. Mhlawumbi igalelo lokunyusa ukugxininiswa kwenkcubeko yokufa eChichén Itzá nakwezinye iindawo, kubandakanywa ubude bombingelelo wabantu kunye nemfazwe. Uyilo lwezakhiwo, iimpawu zee-colonnades kunye neeholide ezinokuhlala kunye namabhentshi endonga; iipramamidi zakhiwe ngamapulatifomu atyunjweyo okwehliswayo kwinqanaba elithi "tablud kunye ne-tablero" eqhutyelwa eTeotihuacan. I-Tabludi kunye ne-tablero ibhekisela kwiprofayili ye-stair-step step of the platform pyramid egcinwe apha, ebonwa apha kule phrofayili ye-El Castillo.
I-El Castillo nayo i-astronomical observatory; kwi-solstice yehlobo, iprojekthi yesiteji ikhanya, ukudibanisa ukukhanya kunye nesithunzi kwenza ukuba kubonakale ngathi inyoka enkulu inqumla amanqanaba eepiramidi. I-Mayanist iFalken Forshaw ithi: "Ubudlelwane phakathi kweTula kunye neChichen Itza buxubusha ngokubanzi kwincwadi entsha ethiwa yiTale of Two Cities . U-scholarship wamva nje (u-Eric Boot ushwankathela oku kwintetho yakhe yakutshanje) ubonisa ukuba akuzange kubekho amandla okwabelana phakathi kwabantu , okanye ababelwana phakathi kwaba "bazalwana" okanye abalawuli beentsebenziswano. Kwakuhlala kubakho umbusi obalaseleyo. AmaMaya ayenamakholeji kulo lonke elaseMesoamerican, kwaye elinye laseTeotihuacan liyaziwa. "
La Iglesia (Icawa)
Indawo yamaMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iMexico La Iglesia (iBandla), iChichén Itzá, eMexico. UBen Smith (c) ka-2006
Esi sakhiwo sasibizwa ngegama elithi Iglesia (iCawa) yiSpeyin, mhlawumbi ngenxa yokuba yayikude kufuphi neNunnery. Isakhiwo esixandekileyo sisakhiwo sokwakhiwa kwePuuc kunye nesigxina sezakhiwo zaseYucatan (iiKenes). Oku mhlawumbi enye yezakhiwo ezithandwayo kwaye zifotwe kwiChichén Itzá; Imizobo edumileyo yekhulu le-19 yenziwa ngeFrederick Catherwood noDesiré Charnay. I-Iglesia iyinxantathu kunye negumbi elinye ngaphakathi kunye nomnyango osentshonalanga. Udongeni lwangaphandle luhlanganiswe ngokuhlobisa imibala, eye yacaca ngokucacileyo ukuya kwinqanaba lephahla. Umngcipheko ubophelelwe kumgangatho womhlaba ngokugqithiseleyo kunye nomnatha; i-motif ephathekayo ephindaphindiweyo ephindaphindiweyo kwinqanaba lephahla. Umongo obaluleke kakhulu wokuhlobisa uyi-mask i-mask ephethe impumlo egxinyiweyo emacaleni kweso sakhiwo. Ukongezelela, kukho imifanekiso emibini emibini phakathi kweemaski kubandakanya i-armadillo, inkobe, i-tortle, kunye ne-crab, obani abane "bacabs" abambe isibhakabhaka kwimfundiso yamaMaya.
UmPristi Omkhulu we-Graves (i-Osario okanye i-Ossary)
Indawo yamaMaya yaseChichén Itzá, Yucatan, Mexico I-Grass Priver's Grave (Osario okanye iBhassari) eChichén Itzá. UBen Smith (c) ka-2006
Ingcwaba lomPristi Omkhulu ligama elinikezelwa kule piramidi kuba liqukethe ibhokisi le-alumna - phantsi kweziseko zalo. Isakhiwo ngokwayo sibonisa iimpawu zeToltec kunye nePuuc ezidibeneyo kwaye ngokuqinisekileyo zikhumbuza i-Castillo. Ingcwaba yomPristi Omkhulu iquka ipiramidi malunga neekhilomitha ezili-30 eziphakamileyo kunye nezitebhisi ezine kwicala ngalinye, kunye neengcwele kwindawo kunye negalari ehamba phambili. Amacandelo amanyathelo ahlotshiswe ngeenyoka ezinamazinyo. Iindonga ezihambelana nesi sakhiwo zihlobo lwenyoka yaseToltec eneenyoka kunye namanani abantu.
Phakathi kweentsika zombini zokuqala isigxina esicatyelelwe ngamatye esesigxina emgangathweni esiya phantsi kuya kwisiseko sepiramidi, apho sivula khona kwi-cavern yemvelo. Umqolomba ungama-36 emanzini angaphantsi kwaye xa kuhlanjululwa, amathambo avela ngamaninzi angcwatyelwayo kunye kunye nempahla yamatyala kunye neminikelo ye-jade, iigolke, i-crystal yamatye kunye neentsimbi zethusi .
I-Wall of Skulls (iTzompantli)
Indawo yamaMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iMexico I-Wall of Skulls (iTzompantli), iChichén Itzá, eMexico. UJim Gateley (c) ka-2006
I-Wall of Skulls ibizwa ngokuba yiTzompantli, eyona nto ingumgama wama - Aztec kule hlobo lwesakhiwo kuba okokuqala eyabonwa yiSpanishi eyoyikwesaba yayisisixeko-dolophu saseAztec saseTenochtitlan .
Isakhiwo seTzompantli eChichén Itzá sisakhiwo seToltec, apho kwafakwa khona iintloko zamaxhoba ezidini; nangona kwakungomnye weeplani ezintathu kwi-Great Plaza, kwakukho ngoBhishophu uLanda , kuphela yile njongo - ezinye zazingama-farces kunye nee-comedies, ezibonisa ukuba i-Itzá yayimnandi. Iindonga zeplani zeTzompantli ziye zineemifanekiso ezidwebileyo zezifundo ezine ezahlukeneyo. Isihloko esiyintloko siyikrele linye; abanye babonisa ummandla onomnikelo wabantu; iinjenge zidla iintliziyo zabantu; kunye namaqhawe angama-skeletonized with shields and arrows.
Indawo yamaMaya yeChichén Itzá, iYucatan, iMexico iTempile yamaVarriors, iChichén Itzá. UJim Gateley (c) ka-2006
IThe Temple of the Warriors yenye yezona zakhiwo ezikhangayo kakhulu eChichén Itzá. Kusenokuba yedwa isakhiwo seMaya esasemva kwexesha elide esaneleyo ngokubanzi ngokwaneleyo ukwenzela ukuba kubuthene. Itempile ineziqalo ezine, ngaphaya kwentshona nangasentla ngamacala angama-200 macala kunye neekwere. Iikholeji zesikwere ziqoshiwe ekuncediseni okuphantsi, kunye namaqhawe aseToltec ; Kwezinye iindawo bahlanganiswa ndawonye kumacandelo, ehlanganiswe ngepaliti kunye nepeyinti ngemibala emihle. Ithempeli lama-Warriors liye lithatyathwa ngitejista ebanzi kunye ne-plain, ihamba ngekampu ngapha nangapha, i-ramp nganye inezibalo zabathengi abaqhelekileyo ukubamba iiflegi. I-chacmool yahlala phambi kokungena. Kuphezulu, iikholomu zeenyoka ezenziwe ngu-S zisekela izithintelo zokhuni (ngoku sele zihamba) ngaphaya kweminyango. Iimpawu zokuhlobisa entloko yenyoka nganye kunye nezibonakaliso zeenkwenkwezi ziqoshwe ngamehlo. Phezu kwentloko nganye yenyoka yisitya esingenanto esingasetyenziselwa njengesibane seoli.
El Mercado (iMarike)
Indawo yeMaya yaseChichén Itzá, Yucatan, Mexico I-Market (i-Mercado) eChichén Itzá. UDolan Halbrook (c) ka-2006
Intengiso (okanye i-Mercado) ibizwa ngokuba yiSpeyin, kodwa umsebenzi wayo ochanekileyo uphantsi kwengxoxo ngabaphengululi. Yona isakhiwo esikhulu, esiqhotyoshelwe ngekholeji eneenkundla eziphakathi. Indawo yangaphakathi yegalari evulekile kwaye ingabonakaliswa kwaye ipatiyo enkulu ihleli phambi kokungena kuphela, kufumaneke ngezitezi ezibanzi. Kwakukho iintloko ezintathu kunye namatye okugaya afunyenwe kulolu hlobo, abaphengululi ngokuqhelekileyo basichazela njengobungqina bemisebenzi yasekhaya - kodwa ngenxa yokuba isakhiwo asiboneli ngasese, abaphengululi bakholelwa ukuba kwakungumsebenzi wendlu okanye ibhunga lomsebenzi. Esi sakhiwo ngokucacileyo sisakhiwo sokwakha iToltec.
I-Mayanist iFalken Forshaw ihlaziye: I-Shannon Plank kwingqungquthela yakhe yakutshanje ichaza le ndawo njengendawo yokubasa umlilo.
Ithempeli lomntu ongcotyiweyo
Indawo yamaMaya yeChichén Itzá, Yucatan, iMexico Ithempeli lomntu onotywala, iChichén Itzá. UJim Gateley (c) ka-2006
Ithempeli lomntu onotywala lisekupheleni komntla we-Great Ball Court, kwaye ibizwa ngokuba yiNdlu yeNdoda e-Bearded ngenxa yemibono emininzi yabantu beardard. Kukhona neminye imifanekiso 'yendoda enobhedu' eChichén Itzá; kwaye ibali elidumiweyo elichazwe malunga nale mifanekiso lalivunywe ngumvuli wezinto zakudala / uhlolisisi uAgasus Le Plongeon encwadini yakhe yeVetiges of the Maya malunga nokuhambela kwakhe eChichén Itzá ngo-1875. "Ngenye yeentsika [esitrateni] emnyango ongasenyakatho [ El El Castillo] ngumfanekiso wesigorha ogqoke intshebe ende, eqondekileyo, ecacile .... Ndibeka intloko yam malunga nelitye ukwenzela ukumela isimo esifanayo ebusweni bam ... kwaye wabizwa ukuba amaNdiya am ukufana kwayo kunye neempawu zam. Bakulandela yonke imilinganiselo yobuso kunye neminwe yabo ukuya kwinqanaba leendvuba, kwaye kungekudala bavakalisa isimangalo esithi: 'Nangu!'!
Ayikho enye yeendawo eziphakamileyo kwimbali yezinto zakudala, ndiyesaba. Ukufumana okungakumbi ukungabi nako kukaAgasus Le Plongeon, khangela iRoman i-Maya , incwadi enesantya nge-19 leminyaka ukuhlolisiswa kweziza zamaMaya ngu R. Tripp Evans, apho ndifumene eli bali.
Ithempeli lamaJagars eChichén Itzá
Indawo yeMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iMexico Inkundla enkulu yeBhola kunye neNdlu yamaJagars, iChichén Itzá, eMexico. UJim Gateley (c) ka-2006
INkundla eNkulu yeBhola eChichén Itzá iyona inkulu kunabo bonke eMesoamerica, kunye neendawo ezidlala emimitha engama-150 ubude kunye netempile encinci.
Le foto ibonisa i-1/2 yezantsi yenkundla yebhola, phantsi kwe-I kunye nxalenye yeendonga zegeyimu. Iindonga ezinde zemihlaba zisezantsi zombini zendima eziphambili zokudlala, kunye neendandatho zamatye zibekwe phezulu kulezi zindonga zecala, mhlawumbi ngenxa yeebhola zokudubula. Ukuxhaswa kwiindawo ezingezantsi zale ndonga kubonisa umdlalo wamandulo webhola webhola, kuquka umnikelo wabashiywe ngabanqobi. Isakhiwo esikhulu kakhulu sibizwa ngokuba yiNdlu yamaJaguars, ekhangele phantsi kwinqanaba lebhola ukusuka kwiplatimpuma yasempuma, kunye nevulo eliphantsi elingaphandle ngaphandle kwendawo enkulu.
Ibali lesibini leNdlu yamaJaguars lifikelelwa ngitepsi ephezulu kakhulu kwimpuma yempuma yenkundla, ebonakala kule sithombe. I-balustrade yale nqanaba iqoshiwe ukuze imele inyoka enenyoka. Iikholam ze-Serpent zixhasa iingqungquthela zesango elibanzi elijongene ne-plaza, kwaye i-doorjamb ihlotshiswe ngeempawu ze-Toltec zesiqhawe. Umfucuza ubonakala apha kwi-jaguar ne-circular shield motif kwi-relief relief, efana neleyo efumaneka eTula. Kulo kamelo yindawo evulekileyo yendawo yokulwa kunye namakhulu amabutho anqabileyo enqwelwe kwidolophana yaseMaya.
U- Augustus Le Plongeon owayengumntu oqhenqileyo wachaza imfazwe kwindawo ephakathi kweNdlu yamaJaguars (ecatshulwa ngabaphengululi banamhlanje ukuba yintonga yekhulu le-9 yePiedras Negras) njengoko imfazwe phakathi kweNkosana uCoh inkokheli yeMoo (igama likaLe Plongeon likaChichén Itzá ) kunye ne-Prince Aac (igama likaLe Plongeon ngenkokeli yexhatshazo), elahlekelwa ngu-Prince Coh. Umhlolokazi kaCoh (ngoku u-Queen Moo) kufuneka atshade neNkosana Aac kwaye waqalekisa uMoo. Emva koko, ngokweLe Lepongeon, u-Queen Moo washiya iMexico eGibhithe waza waba nguIsis, kwaye ekugqibeleni wabuyiselwa! Umfazi kaLe Plongeon Alice.
I-Ring Ring kwiNkundla yeBhola
Indawo yamaMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iMexico iColved Stone Stone, iNkundla enkulu yeBhola, iChichén Itzá, eMexico. UDolan Halbrook (c) ka-2006
Lo mfanekiso unamacenge amatye kwiindonga zangaphakathi zeNkundla eNkulu yeBhola. Imidlalo emininzi yebhola eyahlukeneyo yadlala ngamaqela ahlukeneyo kwi- ballcourt efanayo kwiMesoamerica. Umdlalo ogqithiseleyo kakhulu wawunebhola yerabha kwaye, ngokwemizobo kwiindawo ezahlukeneyo, umdlali wasebenzisa iinqumlo zakhe ukuze agcine ibhola emoyeni ngokukhawuleza. Ngokwezifundo ze-ethnographic zeenguqulelo zakutshanje, amanqaku afunyenwe xa ibhola ibetha phantsi kwindawo yabadlali abachasayo inkundla. Amakhonkco ayenziwe kwiindonga eziphezulu; kodwa udlula ibhola ngendandatho enjalo, kulo mzekelo, iinyawo ezingama-20 ukusuka emhlabathini, kufuneka ukuba ifunyenwe kungekudala.
Izixhobo zeBallgame zifakwe kwezinye iimeko zokugaya izibilini kunye namadolo, i-hacha (i-ax hafted blunt ax) kunye ne-palma, isicatshulwa esinegama lesigxina esicatshulwa kwi-padding. Akucaci ukuba zezi zinto zisetyenziselwa ntoni.
Iibhentshi ezinobuncwane ecaleni kwintendelezo mhlawumbi zinyanzelwe ukugcina ibhola idlala. Ziye zidwetshwe ngeemidlalo zokunyusa. Ezi zixhobo zihamba ngamanqina angama-40 ubude, kwiipaneli zithuba ezintathu, kwaye zonke zibonisa iqela lebhola elinqobileyo eliphethe intloko ehlanjululwe yenye yezinto ezilahlekileyo, iinyoka ezisixhenxe kunye nezityalo eziluhlaza ezimela igazi eliphuma entanyeni yomdlali.
Lo akuyena kuphela inkundla yebhola e-Chichén Itzá; kukho ubuncinane abali-12, ubuninzi babo bincinci, inkundla yamatyala enqwelisiweyo yeMaya.
U-Mayanist uFalken Forshaw uyongezelela: "Ukucinga ngoku kukuba le nkundla ayiyona indawo yokudlala ibhola, ibe yinkundla" ye-effigy "ngenjongo yokufakelwa kwezopolitiko kunye nezonyango zonqulo. ukulungelelaniswa kweefestile zegumbi eliphezulu laseCaracol (oku kuqulethwe kwincwadi kaHorst Hartung, u- Zeremonialzentren der Maya kwaye ayinakunyanzeliswa ngophando.) I-ballcourt nayo yenzelwe ukusebenzisa i-geometry engcwele kunye neenkwenkwezi, ezinye zezo zilandelayo zipapashwa kumajelo. i-alley ihambelana nokusebenzisa i-axis axis ukuba yi-NS. "
El Caracol (I-Observatory)
Indawo yamaMaya yeSichén Itzá, iYucatan, iMexico iCaracol (i-Observatory), iChichén Itzá, eMexico. UJim Gateley (c) ka-2006
I-Observatory e-Chichén Itzá ibizwa ngokuba yi-el Caracol (okanye i-nnail eSpanishi) kuba ine-staircase yangaphakathi ejikeleza phezulu njengegobolondo lenkukhu. I-roundac, i-Caracol igxininisekile yakhiwa kwaye yakhiwa ngokuphindaphindiweyo malunga nokusetyenziswa kwayo, abayingcali bayakholelwa ukuba, ukulinganisa iimbono zeenkwenkwezi. Isakhiwo sokuqala mhlawumbi sakhiwe apha ngethuba lokutshintshwa kwexesha le-9 leminyaka kwaye liqukethe iqonga elikhulu elinemirhoxane elinesiteji ngasentshonalanga. Inqaba ejikelezileyo engamamitha angama-48 ephakamileyo yakhiwa phezu kwesikhulumi, kunye nomzimba ophantsi ophantsi, isahlulo esisezantsi kunye neefestile ezimbini zetyhula kunye nesiteji sokuvota kunye neklasi yokujonga phezulu. Kamva, isetyhula kwaye i-platform yecandelular yongezwa. Iifestile kwinqanaba leCaracol kumkhombandlela wamakhadidi kunye neentloko kwaye zikholelwa ukuba zilandele ukuhamba kweVenus, i-Pleides, ilanga nenyanga nezinye iziganeko zasezulwini.
I-Mayanist uJ. Eric Thompson wachaza i-Observatory ngokuthi "ifihla ... ikhekhe lomtshato wesibini edibanisa kwikharoni yesikwele apho ifike khona." Ngengxoxo epheleleyo malunga ne-archaeoastronomy ye-el Caracol, bona i-Skywatchers ka-Anthony Aveni.
Ukuba unomdla kwimiboniso yamandulo , kukho ezininzi ezininzi ukufunda ngazo.
Indawo yamaMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iMexico i-Sweat Ingaphakathi lobomi, iChichén Itzá, eMexico. UDolan Halbrook (c) ka-2006
Amabhafu ahlambulukileyo - amagumbi aqhotyoshelweyo atshiswa ngamatye - kwaye kwaye kwakhiwa ukwakha loluntu kwiMesoamerica kwaye inene, ininzi yehlabathi. Zasetyenziselwa uhlambuluko kwaye zonyango kwaye ngamanye amaxesha zidibaniswa nenkundla yebhola . Ulwakhiwo oluyintloko luquka igumbi lokukrola, i-oven, izivulo zokuphuphuma umoya, izikhukhula, kunye namanzi. AmaMaya amagama okuhlamba afaka i-kun (i-oven), i-pibna "indlu yokuthambisa" kunye ne-chitin "ihovini".
Oku kuhlamba i-Toltec ku-Chichén Itzá, kunye nesakhiwo esipheleleyo siqukethe i-portico encinci kunye neebhentshi, igumbi le-steam kunye nophahla oluphantsi kunye namabhentshini aphantsi apho azinokuphumla khona. Emuva kweso sakhiwo kwakukho i-ovni apho amatye ayatshiswa khona. Uhambo lwaluhlula ukuhamba ukusuka apho kuthungwa khona amatye kunye namanzi aphonswa phezu kwawo ukuvelisa isitya esifanelekileyo. Umsele omncinci wakhiwa ngaphantsi komgangatho ukuze kuqinisekiswe umjelo ofanelekileyo; kwaye kwiindonga zegumbi zivuleleke ezimbini zokuvula umoya.
I-Colonnade eThempilini yama-Warriors
Indawo yamaMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iColorade yaseMexico ethempelini lamaVarriors, iChichén Itzá, eMexico. UJim Gateley (c) ka-2006
I-Adjacent Temple yeVarriors e-Chichén Itzá iindibano ezide zinekhenkethi ezinamabhentshi. Le ngqungquthela idlulisela inkundla enkulu esondeleyo, idibanisa imibutho yaseburhulumenteni, ibhotwe, yokuphatha kunye nemakethi, kwaye iToltec kakhulu ekwakheni, ifana nePiramidi B eTula . Abanye abaphengululi bakholelwa ukuba lo mbandela, xa uthelekiswa nesakhiwo sobugcisa bePuuc kunye neenkcukacha ezibonakalayo njengokuba kubonwe kwi-Iglesia, kubonisa ukuba iToltec ithathe indawo esikhundleni seenkokeli zenkonzo kubafundisi beemfazwe.
Indawo yeMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iMexico iJaguar Terrone, iChichén Itzá, eMexico. UJim Gateley (c) ka-2006
Enye into ekhethiweyo ekhethiweyo eChichén Itzá iyitrone yejaguar, isihlalo esinjenge-jaguar ngokuqinisekileyo enziwe kubalawuli. Nguye kuphela oshiywe kwisayithi evulelekileyo kuluntu; intsalela ingamamyuziyam, kuba zidla ngokucatshulwa ngokugqithiseleyo ngegobolondo eboyiweyo, i-jade kunye ne-crystal. Izihlalo zobukhosi zaseJaguar zatholakala kwiCastillo nakwiSihlomelo seNunnery; zihlala zifunyanwa ziboniswe kwiibumba kunye neebumbi.
El Castillo (Kukulcan okanye iNqaba)
Indawo yeMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iMexico i-El Castillo (iKukulcan okanye iNqaba), iChichén Itzá, eMexico. UJim Gateley (c) ka-2006
ICastillo (okanye inqaba eSpeyin) sisikhumbuzo esicinga abantu xa becinga ngoChichén Itzá. Ngokuyinxalenye yokwakhiwa kweToltec , kwaye mhlawumbi ihamba ngexesha lokuhlanganisana kokuqala kweenkcubeko kwi-9 leminyaka AD kwiChiken. I-El Castillo iyindawo ephambili ekupheleni kwe-Great Plaza. Iipiramidi iphakamileyo ezingama-30 kunye neekhilomitha ezingama-55 kwicala, kwaye yakhiwa kunye neesithoba eziphambili eziphambili ezinezitebhisi ezine. Izitepsi zineenqwelwana ngeenyoka ezinemibala evuliwe, intloko evulekileyo emanzini kunye ne-rattle ephakamileyo phezulu. Ukulungiswa kokugqibela kwesi sikhumbuzo kwakuquka enye yeetrone zobukhosi eziziwayo ezivela kwiindawo ezinjalo, kunye nepeyinti ebomvu kunye nee-inse zeenyawo kunye namachaphaza kwengubo, kunye ne-chert fangs. Isiteyunithi esinqununu nomnyango ungasentla, kwaye ingcwele ingqonge igalari kunye nepartico enkulu.
Ulwazi malunga nelanga, i-Toltec, kunye neeMakhalenda zakhiwa ngokucophelela kwi-Castillo. Inqanaba ngalinye linamanyathelo angama-91, amaxesha amane anama-364 kunye neplani ephezulu elingana nama-365, iintsuku kwikhalenda yelanga. Iipiramidi ineepaneli ezingama-52 kwimimandla emithathu; 52 yinani leminyaka kwimijikelezo yeToltec. Ngamanye amathandathu amanyathelo ahlukeneyo ahlukeneyo amabini: 18 kwiinyanga kwikhalenda yaminyaka yonke yamaMaya. Ininzi kakhulu, nangona kunjalo, ayikho imdlalo yamanani, kodwa inyaniso yokuba kwii-equinox ezizenzekelayo nezizenzekelayo, ilanga elikhanyayo emanqeni epeyinti lenza izithunzi kwiibrafrades ebusweni obukumntla obubukeka njenge-rattlesnake.
U-Archaeologist uEdgar Lee Hewett uchaze i-Castillo njengento eyilwe "yendlela ephakamileyo kakhulu, ebonisa inkqubela phambili kwizakhiwo." Abo banyanisekileyo baseSpain abanentshiseko yokutshutshisa uBhishophu uLanda babika ukuba isakhiwo saziwa ngokuba iKukulcan, okanye 'inyoka enenyoka' ipiramidi, ngokungathi kufuneka sixelelwe kabini.
Umboniso omangalisayo we-equinoctial e-El Castillo (apho inyoka ihamba khona kwi-balustrades) yayifakwe ngevidiyo ngexesha le-Spring Equinox 2005 ngu-Isabelle Hawkins kunye ne-Exploratorium. I-videocast iguqulelwe kwiinguqulelo zesiSpanish neesiNgesi, kwaye umboniso ugcina ihora elihle elinde amafu abe yingxenye, kodwa inkomo engcwele! kulungele ukubukela.
El Castillo (Kukulkan okanye iNqaba)
Indawo yeMaya yaseChichén Itzá, Yucatan, iMexico El Castillo (Kukulcan okanye iNqaba), iChichen Itza, eMexico. UJim Gateley (c) ka-2006
Ukuvalwa kwe-balustrades kumntla we-El Castillo, apho iindawo ze-sundial zesikhumbuzo zibonwa ngexesha le-equinox.
Indawo yeMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iMexico IsiHlomelo seNunnery eChichén Itzá, eMexico. UBen Smith (c) ka-2006
IsiHlomelo seNunnery sisekho nangoko kufuphi neNunnery kwaye ngelixa livela kwixesha lokuqala lamaMaya laseChichén Itzá, libonisa impembelelo yendawo yokuhlala yangaphambili. Esi sakhiwo sisitayela seChenes, isitayela saseYucatan sendawo. Iqukethe i-lattice motif kwinqaba lephahla, lizaliswe ne-Chac masks, kodwa iquka inyoka engaphazamisayo eqhutyelwa kwikhosi yayo. Umhlobiso uqala kwisiseko kwaye uya kwinqanaba le-cornice, kunye ne-façade ehlanganiswe ngokupheleleyo kunye neminki yamaninzi emvula enomntu osisigxina esiphathelene nomnyango. Ukubhaliswa kwe-hieroglyphic kusekwinqanaba.
Kodwa into engcono kakhulu ngeSihlomelo seNunnery kukuba, ukusuka kumgama, isakhiwo sonke siyi-mask (okanye i-witz) mask, kunye nomntu wabantu njengempumlo kunye nomnyango emlonyeni wemaski.
I-Cenote Engcwele (I-Well of the Sacrifices)
Indawo yamaMaya yeSichén Itzá, iYucatan, iMexico Ingcwele Engcwele (iCenote), iChichén Itzá, eMexico. U-Oscar Anton (c) ka-2006
Intliziyo yeChichén Itzá yi-Sacred Cenote, eyazinikela ku-Chac God, uMaya uThixo wemvula kunye nokukhanya. Iindawo ezingamamitha angama-300 kumntla weklasi yaseChichén Itzá, kwaye idibene kuyo ngumbango, i-cenote yayiyinxalenye ephakathi kweChichén, kwaye, ngokwenene, isayithi libizwa ngokuba yi-Chichén Itzá lithetha "Umlomo weLizwe le-Itzas" . Ekupheleni kwaloo cenote yinto encinci yokuhlambela.
I-cenote yinto eyenziwe yendalo, i- karst emgodini ixutywe kwi-limestone ngamanzi angaphantsi komhlaba, emva koko i-ceiling yawa, edala ukuvula phezu komhlaba. Ukuvulwa kwe-Sacred Cenote kungamamitha angama-65 ububanzi (kunye ne-acre kwindawo), kunye namacala angamaqondo angama-60 angaphezulu kwezinga lamanzi. Amanzi aqhubeka ngamanye amawaka angama-40 kwaye ngezantsi a malunga neenyawo ezili-10 zodaka.
Ukusetyenziswa kwale cenote kwakungenxa yokuzibingelelo kunye nemibhiyozo; kukho inxalenye yesibili ye-karst (ebizwa nge-Xtlotl Cenote, ephakathi kweChichén Itzá) eyayisetyenziswa njengomthombo wamanzi kubantu baseChichén Itzá. Ngokutsho kweBhishophu uLanda , amadoda, amabhinqa kunye nabantwana baphoswa bephila kuwo njengedini kunothixo ngexesha lokomalela (ngokwenene uBhishophu uLanda wabika ukuba amaxhoba ahlawulelayo azintombi, kodwa loo nto yayiyinto engabalulekanga kwiiToltec neeMaya eChichén Itzá). Ubungqina bemivubukulo buxhasa ukusetyenziswa kwendawo kunye nomhlaba wokubingelelwa kwabantu. Ekupheleni kwekhulu lama-20, uMnumzana waseMelika wase-American u-Edward H. Thompson wathenga iChichén Itzá waza waqhayisa i-cenote, efumana ubhedu kunye negolide, iintsimbi, iifake, iikomityi, iifomfini, iifom. Kwaye, ewe, amathambo amaninzi abantu, amadoda. kunye nabantwana. Zininzi zale nto zithunyelwa ngaphandle, ukuthandana phakathi kwekhulu le-13 neye-16 le-AD emva kokuba abahlali bashiye iChichén Itzá; ezi zimela ukusetyenziswa kwe-cenote ukuya kwi-colonization yaseSpain. Ezi zinto zathunyelwa kwiMyuziyam yasePeabody ngo-1904 waza wabuyela eMexico kuma-1980.
I-Cenote Engcwele - Eyona Iminikelo
Indawo yamaMaya yaseChichén Itzá, iYucatan, iMexico iCenote engcwele (i-Well of the Sacrifices), iChichén Itzá, eMexico. U-Oscar Anton (c) ka-2006
Esi sinye isithombeni se-karst ebizwa ngokuba yi-Sacred Cenote okanye i-Well of Sacrifices. Kufuneka uvume, isobho se-pea esiluhlaza sibukeka ngathi sihamba ngequla elimangalisayo.
Xa umbhali wezinto zakudala u-Edward Thompson wahlamba i-cenote ngowe-1904, wafumana ubungqimba obumhlophe obuluhlaza obumhlophe, ububanzi obunemitha engama-4.5 ukuya ku-5,5, ehlala phantsi kweemithombo eziphathekayo zeMaya eziluhlaza okwesibhakabhaka ezisetyenziswe njengenxalenye yamasiko aseChichén Itzá. Nangona uT Thompson akazange aqaphele ukuba le nto yayinguMaya Blue, uphando lwangoku lubonisa ukuba ukuvelisa i-Maya Blue kwakuyinxalenye yesithethe sokubingelelwa kwi-Sacred Cenote. Jonga i-Maya Blue: iRituals kunye neRipipe ngolwazi olungakumbi.
Neanderthals kwiCave Gorham, iGibraltar
Ukwakha J eM Monte Alban kwisiza saseZapotec eMexico
Amasayithi ePaleolithic aphezulu eYurophu
I-Rujm el-Hiri (i-Golan Heights) - I-Ancient Observatory
I-Midden - I-Archaeological Waste Dam
'Ain Ghazal (iJordan)
IWinwood University Admissions
Malcom X eMecca
Isingeniso kwiNcwadi kaHabhakuki
I-Top 10 Facts About Whales, iDolphins ne-Porpoise
Iifom zokudlala zemidlalo: 5 Iindlela ezininzi eziqhelekileyo zokudlala umdlalo
Umthi ophezulu wentsapho
Indlela yokufunda i-Manga ngaphandle kokuguqulwa
I-Sepoy Mutiny ka-1857 yaxhaphaza iBrithani yaseBrithani eNdiya
Indlela Yokuba I-Chaser Ster
Ukusebenzisa iiFragment zezivakalisi ngokufanelekileyo
Imfazwe yaseVietnam: F-4 Phantom II
AmaPirates: Inyaniso, Inyaniso, Imithetho kunye neengqungquthela
I-Google Classroom ichazwe
Iingoma ezibalulekileyo zabasebenzi
Ukubhiyozela iBabon With Kids
Izinto ezilishumi elinesibini omele uzazi malunga neSibonelo seTesla 3
Izizathu Ezinhlanu Abantu Abaphumelelanga Uvavanyo lweBha
Izinto zeeNcwadi eziLungileyo zeFransi
UNLV, iYunivesithi yaseNevada i-Las Vegas GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Umthetho 11: I-Teeing Grounds